Paris-Roubaix ပွဲ Mathew Hayman အနုိုင်ရ..။
ပီတာဆာဂန်နှင့် ကာစီးလာလားတုို့ ကံဆုိုး...။
Spring Classics ပွဲတွေထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံးပွဲတခုဖြစ်တဲ့ Paris-Roubaix ပွဲ ('The Queen of the Classics, or 'The Hell of the North) ပွဲ မှာ Mathew Hayman (Aus) Orica-GreenEdge က 5:51:53 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ (၄ ကြိမ်ရထားဖူးသူ) Tom Boonen (Bel) Etixx - Quick-Step က နှာတဖျား နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Ian Stannard (GBr) Team Sky က တတိယ ရသွားပါတယ်။
၁၁၄ ကြိမ် မြောက် Paris-Roubaix ပွဲဟာ 258 Km ရှည်ပြီး ကျောက်တုံးခင်း တောင်ကုန်း cobbled climbs ၂၇ ခုအထိပါဝင်ပါတယ်။ ပြိးခဲ့တဲ့ သတင်းပတ် ကစီးခဲ့တဲ့ Flunder ထက် ကျောက်တုံးခင်းလမ်းများပေမဲ့ သိပ်အမြင့်ကြီးတွေ မပါပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျဉ်းမြောင်းပြီး ရွံတွေပေနေတဲ့အတွက် အတော်အန္တရယ် များပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ၃ ကြိမ် ချန်ပီယံဖြစ်ဖူးတဲ့ ကာစီးလာလား လုိုပုဂ္ဂိုလ်တောင် လဲပြိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲကို TV ကနေ အစ-အဆုံး Live ပြတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေလဲမြင်ပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်က ကာစီလာလား လဲတာကို မမြင်လုိုက်ပါ။ ဆာဂန် ခုန်ပျံကျော်လွှားပြီးထွက်လာတာကိုသာမြင်လုိုက်ပြီး ချော်လဲသူဟာ ကာစီးလာလာမှန်း မသိလုိုက်ပါ။
ပွဲ အစ-အဆုံးကို နဲနဲခြုံပြောရမယ်ဆုိုရင် ကီလီု ၃၀ လောက်စီးပြီးကတည်းက ရှေ့မှာ လူ ၂၀ ခန့်အုပ်တခုက ၂ မီနစ်လောက်အသာနဲ့ပြေးနေပါတယ်။ နောက် ပုိုင်းမှာ ၄ မီနစ်အထိဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီနောက် Peloton အတွင်း ၂ ဖွဲ့ကွဲ သွားပြီး အခု ပထမ ရသူတွေအပါဝင် ၁၀ ကျော် လွတ်ထွက်သွားပါတယ်။
အဲလုိုလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဆာဂန်၊ ကာစီးလာလားတုို့အဖွဲ့က Peloton ထဲ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ တုိုနီမာတင်ဦးဆောင်တဲ့ ဒုတိယ အုပ်စုဟာ လက်ရွေးစဉ် တဒါ ဇင်လုိုဖြစ်နေပြီး အသားကုန်အရှိန်တင်ပြေးနုိုင်တဲ့အတွက် ရှေ့က အုပ်ကုို မီဖုို့ တဖြေးဖြေးနီးလာပါတယ်။
အနောက်က Peloton ထဲမှာလည်း ဆာဂန်နဲ့ ကာစီးလာလာ တလှည့်စီ အရှိန် တင်စီးရာကနေ ကီလုို ၅၀ ခန့်အလိုမှာ ရှေ့ကုိုမီဖုို့ ၃၅ စက္ကန့်ပဲလုိုပါတော့တယ်။ ကံဆုိုးချင်တော့ အဲဒီအချိန်မှာ ကာစီးလာလားချော်လဲပြီး ဆာဂန်က ခုန်ပျံ ကျော်လွှားပြီး သီသီလေးလွတ်လာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူမှာ အသင်းဖေါ်ပါမလာတော့ပါဘူး။ (ကျနော်အထင် မမှားဘူးဆုိုရင် သူဟာ ကာစီးလာလာနဲ့တွဲစီးဖုို့ ဆုံးဖြတ်ထားပုံရပါတယ်)။ တခြား ရှေ့မှာ ပြုတ် ကျန်ခဲ့သူတွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြန်စီးပေမဲ့ အချင်းချင်း အလှည့်ကျတာဝန်ခွဲဝေတာ အ ဆင်ပြေပုံမရပါဘူး။ ဒါကြောင့် တမီနစ်ခန့်ပြတ်နေတာကို ၅၀ စက္ကန့်လောက် အထိကျအောင်သာစီးနုိုင်ပြီး အဲဒီထက် ပိုတက်မလာခဲ့ပါ။
ရှေ့ပြေးအုပ်စုထဲမှာတော့ တွန်ဘွန်း၊ ဟာဂန်နဲ့ အခြား ၅ ဦးခန့်ဟာ အလှည့်ကျ အရှိန်တင်ပြီး စနစ်တကျစီးနုိုင်တဲ့အတွက် Gap က တမီနစ်အထက် ပြန်တက် သွားပါတယ်။ ကီလုို ၃၀ လောက်အလုိုအထိ တမီနစ်ပြတ်နေဆဲ၊ ပြီးတော့ ဆာဂန်ဆီမှာ အသင်းဖေါ် သုို့မဟုတ် စိတ်တူကုိုယ်တူခြေရည်တူ စီးနုိုင်သူ မရှိ ဘူးဆုိုတော့ အဲဒီမှာ ကတည်းက ဒီနေ့ ဆာဂန်တယောက် ခြေကောင်းပေမဲ့ ကံမကောင်းတော့ဘူးဆုိုတော ပေါ်နေတယ်ပြောရမှာပါ။
ရှေ့ပြေးအဖွဲ့တွင်းမှာလည်း စကုိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေ ၂ ကြိမ်တောင်လဲပြိုပြီး အတော်အခြေအနေဆုိုးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ၅ ကီလုိုမှာတော့ ရှေ့ပြေး ၅ ဦးပဲ ရမယ်ဆုိုတာသေချာသွားပါပြီ။ ၀ါရင့် တွန်ဘွန်းနဲ့ ဟာဂန်တုို့ရမယ်ဆုိုပြီး ထင်ခဲ့ပေမဲ့ ကြားကတယောက်ရသွားပါတယ်။
ဒီနေ့ပန်းဝင်တဲ့ ၁-၁၀ စာရင်းကတော့...
11 Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
လဲပြိုမှုအတွင်းပါသွားတဲ့ ကာစီးလာလာကတော့ ၇ မီနစ်ခွဲနောက်ကျပြီး နံပတ် ၄၀ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် စက်ဘီးပွဲ (အထူးသဖြင့် ဒီလုို အန္တရယ်များလှ တဲ့ Spring Classics ကျောက်တုံးခင်းလမ်းတွေဟာ) ခြေကောင်းဖုို့အပြင် ကံ ကောင်းဖုို့လည်းလုိုပါသေးတယ်။ ကာစီးလာလားသာ လဲချော်မှုမဖြစ်ဘူးဆုိုရင် သူနဲ့ ဆာဂန်ပေါင်းစီးရင်းနဲ့ ပွဲရလာဒ်ဟာ တမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆုိုတာ သံသယ ရှိစရာမလုိုပါ။ ။
ပွဲအပြီး ဆာဂန်ရဲ့ ပြောကြားချက်...
"It wasacrazy and dificult day. Roubaix isagreat race, but it's hard to win here. We lost the Oscar Gato already at the beginning of the race and he was my key assistant. Each team has its own strategy. When crashes split the peloton more powerful teams had riders in front and they have had to work against me and complicate mine return to the top.
I was able to work with Cancellara, but after the his fall we lost good rhythm and thus the chances of winning. For Roubaix is also needed luck and today I didn't."